amụma nzuzo - GamesMixie
GamesMixie Wuru Iji Okè
Mmadụ Bịa ka http://www.gamesmixie.com/ (na “Site”).Anyị na-aghọta na nzuzo online dị mkpa ka ndị ọrụ nke anyị Site, karịsịa mgbe eduzi business.This okwu na-achịkwa anyị nzuzo atumatu na-akwanyere ndị na-ọrụ nke Site (“Visitors”) na-eleta na-enweghị transacting azụmahịa na Visitors na-aha ka transact azụmahịa na Site na-eme ka ojiji nke dị iche iche ọrụ awa site http://www.gamesmixie.com/ (ịgụnye, “Services”) (“ikike ahịa”).”Chọpụta mmadụ” na-ezo aka ozi ọ bụla nke na-emetụta ma ọ bụ nwere ike ji mee ka a mata, kọntaktị, ma ọ bụ ịchọta onye ọmụma dị otú ahụ metụtara, na nsonye, ma na ọnweghị oke, aha, address, nọmba ekwentị, fax nọmba, adreesị ozi ịntanetị, ego profaịlụ, nọmba nchekwa ọha, na kaadị ozi. Chọpụta mmadụ adịghị agụnye ozi na-anakọtara anonymously (na bụ, enweghị njirimara nke onye ọrụ) ma ọ bụ omume igwe mmadụ ọmụma abụghị otu mata individual.What chọpụta mmadụ na-anakọtara? Anyị nwere ike na-anakọta isi ọrụ ozi profaịlụ niile nke anyị ọbịa. Anyị na-anakọta na-esonụ na ozi ndị ọzọ site na anyị Ikike Ahịa: aha, adreesị, nọmba ekwentị na adreesị email nke Authorized Ahịa, ọdịdị na size nke azụmahịa, na ọdịdị na size nke mgbasa ozi Ndepụta na Ikike Ahịa ezube ịzụta ma ọ bụ sell.What òtù na-achịkọta ihe ọmụma? Tụkwasị na nke anyị kpọmkwem collection of ọmụma, anyị ọzọ ọrụ mgbere (dị ka kaadị ụlọ ọrụ, clearinghouses na anoghi n'ulo oba) onye nwere ike inye ndị dị otú ahụ ọrụ dị ka Ebe E Si Nweta, insurance, na escrow ọrụ nwere ike na-anakọta ozi site na anyị Visitors na Authorized Ahịa. Anyị adịghị achịkwa otú ndị a na ndị ọzọ na-eji ihe ọmụma dị otú, ma anyị na-eme jụọ ha ka ha igosipụta otú ha na-eji ozi nkeonwe nyere ha si ọbịa na Authorized Ahịa. Ụfọdụ n'ime ndị a na ndị ọzọ nwere ike ịbụ intermediaries na-eme ihe nanị dị ka njikọ na nkesa yinye, na adịghị echekwa, ejigide, ma ọ bụ jiri ozi nyere them.How ka Site iji chọpụta mmadụ?Anyị na-eji chọpụta mmadụ hazie Site, mee kwesịrị ekwesị ọrụ àjà, na ịrụzu n'ụbọchị Lọt na n'ire na-arịọ na Site. Anyị nwere ike kpaliri ọbịa na Authorized Ahịa banyere nnyocha ma ọ bụ zuo ma na-ere ohere na Site ma ọ bụ ozi ndị metụtara isiokwu okwu nke Site. Anyị nwekwara ike iji chọpụta mmadụ kpọtụrụ Visitors na Authorized Ahịa omume kpọmkwem ase, ma ọ bụ na-enye rịọrọ ozi. Na onye nwere ike ihe ọmụma nwere ike na-akọrọ?Chọpụta mmadụ banyere Ikike Ahịa nwere ike na-akọrọ ndị ọzọ Authorized Ahịa ndị chọrọ ka inwale nwere azụmahịa na ndị ọzọ Authorized Ahịa. Anyị nwere ike ịkekọrịta nchịkọta ihe ọmụma banyere anyị Visitors, gụnyere demographics anyị ọbịa na Authorized Ahịa, na anyị mmekọ ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na mgbere. Anyị na-enye ohere “họrọ ọpụpụ” nke na-anata ozi ma ọ bụ na-kpọtụụrụ anyị ma ọ bụ ihe ọ bụla gị n'ụlọnga eme na nnọchite anyị. Olee otú chọpụta mmadụ echekwara?Chọpụta mmadụ anakọtara site http://www.gamesmixie.com/ na-ntukwasi-obi echekwara na ọ bụghị inweta ọzọ ma ọ bụ ọrụ nke http://www.gamesmixie.com/ ma e wezụga maka ojiji dị ka e gosiri n'elu. Olee nhọrọ dị ka ọbịa banyere collection, iji na nkesa nke ihe ọmụma?Ọbịa na Authorized Ahịa nwere ike ịpụ na ịnweta unsolicited ọmụma si ma ọ bụ na-kpọtụụrụ na anyị na / ma ọ bụ anyị mgbere na mmekọ ụlọ ọrụ site na-anabatakwa ozi ịntanetị dị ka a gwara, ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị na [Address] Na-Kuki Ji na saịtị?Kuki na-eji a dịgasị iche iche nke ihe ndị mere. Anyị na-eji kuki iji nweta ihe ọmụma banyere ihe na-amasị anyị Visitors na ọrụ ha họrọ. Anyị na-ejikwa kuki maka ebumnuche nche na-echebe anyị Ikike Ahịa. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ihe Ikike Ahịa na ite na na saịtị bụ ejibeghi n'ihi na ihe karịrị 10 nkeji, anyị ga-akpaghị aka abanye Authorized Ahịa off.How ka http://www.gamesmixie.com/ eji ozi nbanye? http://www.gamesmixie.com/ eji ozi nbanye, na nsonye, ma na ọnweghị oke, IP adreesị, ISPs, na ihe nchọgharị ụdị, iji nyochaa na ọnọdụ, dọọ Site, soro a ọrụ ije ma na-eji, na-akpọkọta sara mbara igwe mmadụ information.What nwunye ma ọ bụ ndị na enye ọrụ nwere ohere chọpụta mmadụ si Visitors na / ma ọ bụ Ikike Ahịa na Site? http://www.gamesmixie.com/ bataworo na ga-anọgide na-abanye mmekọrịta na ndị ọzọ affiliations na a ọnụ ọgụgụ nke vendors.Such mgbere nwere ike inweta ụfọdụ chọpụta mmadụ na a mkpa ịmata ihe ndabere maka eleba Ikike Ahịa maka ọrụ eligibility. Anyị na iwu nzuzo anaghị ekpuchi ha nchịkọta ma ọ bụ ojiji nke ozi a. Ngosi nke chọpụta mmadụ ime iwu. Anyị ga-egosi chọpụta mmadụ iji soro a ikpe iji ma ọ bụ sobpona ma ọ bụ a arịrịọ si a mmanye iwu gị n'ụlọnga nyak ọmụma. Anyị ga-igosipụta chọpụta mmadụ mgbe mkpa iji chebe nchekwa nke anyị ọbịa na Authorized Ahịa. Olee otú ihe Site na-chọpụta mmadụ ala?All nke anyị ọrụ ndị maara na anyị nche iwu na omume. The chọpụta mmadụ anyị Visitors na Authorized Ahịa bụ nanị inweta ole na ole ruru eru ọrụ bụ ndị e nyere a paswọọdụ iji inweta ohere ka ọmụma. Anyị oditi anyị nche na usoro na Filiks na mgbe niile. mwute ozi, dị ka nọmba kaadị ego ma ọ bụ na-elekọta mmadụ nche nọmba, na-na-echebe site na izo ya ezo ogbugba ndu, na ebe iji chebe ọmụma zitere n'elu Internet. Mgbe anyị na-commercially ezi uche jikoro ịnọgide na-enwe a ala saịtị, electronic nkwukọrịta na ọdụ data bụ isiokwu njehie, tampering na-agbaji-ins, na anyị nwere ike ekwe nkwa ma ọ bụ akwukwo ikpe na ndị dị otú ahụ ihe ndị ga-bụghị na-ebe na anyị na-agaghị-atụba ya na ọbịa ma ọ bụ Authorized Ahịa maka ihe ọ bụla dị otú ahụ pụtara. Olee otú Visitors agbazi ọ bụla na-adabaghị na chọpụta mmadụ?Ọbịa na Authorized Ahịa nwere ike ịkpọtụrụ anyị imelite chọpụta mmadụ banyere ha ma ọ bụ na-agbazi ọ bụla-adabaghị site emailing anyị. Ike a Visitor ihichapụ ma ọ bụ deactivate chọpụta mmadụ anakọtara site na saịtị?Anyị na-enye Visitors na Authorized Ahịa na a usoro ihichapụ / deactivate chọpụta mmadụ si Site si nchekwa data site na ịkpọtụrụ . Otú ọ dị, n'ihi backups na ndekọ nke deletions, o nwere ike ịbụ-agaghị ekwe omume ka ihichapụ a Visitor si ntinye enweghị retaining ụfọdụ mmapụta ọmụma. Onye choo ka nwere chọpụta mmadụ agbanyụọla ga-ozi a functionally ehichapụ, na anyị ga-adịghị ere, nyefe, ma ọ bụ iji chọpụta mmadụ metụtara onye ahụ n'ụzọ ọ bụla na-aga n'ihu. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na Nzuzo Mgbanwe?Anyị ga-ekwe ka anyị ọbịa na Authorized Ahịa maara banyere mgbanwe anyị iwu nzuzo site ikenye mgbanwe dị otú ahụ na Site. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na anyị na-na-na-agbanwe agbanwe anyị iwu nzuzo n'ụzọ na-pụrụ ime ka ngosi nke chọpụta mmadụ na a Visitor ma ọ bụ Ikike Ahịa mbụ rịọrọ ghara mara, anyị ga-akpọtụrụ ndị dị otú ahụ Visitor ma ọ bụ Ikike Ahịa na-ekwe ka ndị dị otú ahụ Visitor ma ọ bụ Ikike Ahịa iji gbochie ụdị ngosi. Links:http://www.gamesmixie.com/ dere njikọ ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ. Biko mara na mgbe ị pịa otu n'ime ndị a njikọ, na ị na-akpụ akpụ na ọzọ na saịtị weebụ. Anyị na-agba ị na-agụ na nkwupụta nzuzo nke ndị a jikọtara saịtị dị ka nzuzo ha atumatu nwere ike iche na nke anyị.
Jiri ọ bụla ngwaọrụ / faịlụ na gị onwe gị n'ihe ize ndụ, http://www.gamesmixie.com/ bụ bụghị maka nsogbu ọ bụla mere gị na kọmputa ma ọ bụ mebiri na ngwaọrụ ndị ọzọ site n'iji ngwá ọrụ ebe a. Tools ebe a nwere ike ma ọ na-arụ ọrụ, Anyị nwere ike ghara ẹkenịmde dara iwu ma ọ bụrụ na ha na-eme na-.
All Ndị aghụghọ na Hacks Ikpeazụ enyocha:
Atụmatụ download ọsọ n'ihi na ngwaọrụ gị:
votu Ugbu a
Ndi na-arụ ọrụ maka Ị?
Njọ Iji Die 2 Hacks – Hack Unlimited Money 2017
Disney Magic Alaeze Ndị aghụghọ – Hack Unlimited bara nnukwu uru na Magic
Nrọ League Soccer Mkpụrụ ego eji Aghọ Aghụghọ Ule – Unlimited ego Hack 
Paireti Eze Hacks – Unlimited spins na ego
Omimi ozi hourglass Hack Ndị aghụghọ – Ọ dịghị Survey Free 